Fisehoana fahadiovan'ny rano mavo mavo (GC) 99,0% min Rano 0,2% ma across Nampiasaina tamin'ny indostria, synthesie, loko ary fanafody fivarotam-panafody. ☑Araka ny fiasan'ny N-alkylation eo amin'ny o-ethylaniline sy 2-bromopropane dia azo atao ny chlorfenapyr. Ity dia famonoana herisetra voafantina mialoha ary misy vokany tsara amin'ny tsimparifary sy ahidratsy malalaka. ☑O-Ethylaniline koa dia akora hita ao amin'ny methamchlor sy ny éthithamine ethil methamidine. ☑ Amin'ny loko ...
Fisehoana: Fahadiovan'ny rano mangarahara: 99.9% min Rano: 0,03% max Loko (Pt-Co): 10 Acid Hydrocyanic (mg / kg): 10max Ammonia (mg / kg): Acétone 6max (mg / kg): 25max Acrylonitrile ( mg / kg): 25max Propionitrile (mg / kg): 500max Fe (mg / kg): 0.50max Cu (mg / kg): 0,05max 150kg / amponga, 12Mt / FCL na 20mt / FCL UN No.1648, Kilasy: 3, vondrona fonosana: II ☑Fandinihana kemika sy famakafakana fitaovana. Acetonitrile dia mpanova organika sy solvent ho an'ny chromatography sosona manify, chromatography taratasy, spectroscopic a ...
200kg / amponga, 16Mt / FCL na tanky ISO entana tsy mampidi-doza ☑ Izy io dia ampiasaina amin'ny alàlan'ny indostria, synthesie, loko ary fanafody. Fitaovana fiberGlass polyester polyester, izay manafaingana ny polymerization; mpanampy mpanampy amin'ny famokarana resin ny fifanakalozana ion sy ny resina akrilika; ☑ Izy io dia ampiasaina amin'ny famokarana varnish ny polyester tsy miangona; mpitsabo mpanampy fanafody ho an'ny famokarana schistosomiasis, penicillin ary chloramphenicol; polymer Polymerization ...
25kg / amponga, 8mt / FCL UN No.2811, Kilasy: 6.1, vondrona fonosana: III ☑ 2,6-dihydroxytoluene dia vovoka kristaly fotsy na saika fotsy, izay mora levona anaty rano ary manana asidra malemy. Izy io dia afaka mamokatra eter, ester, ketone ary akora hafa amin'ny fihetsika simika. Noho ny 2, 6-dihydroxytoluene dia manana toetra ara-batana sy simika manan-danja maro, noho izany dia manana fampiharana manan-danja tokoa amin'ny indostrian'ny simika. Ny sehatry ny fampiharana dia misy resin synthetic, fandokoana, fanafody, pestiside ...
☑200kg / amponga, 16mt / FCL na tanky ISO ☑UN No.2929, Kilasy: 6.1, vondrona fonosana: I ☑ Methyl fluoroacetate dia simika misy poizina be, izay afaka mandrisika ny maso, ny taovam-pisefoana sy ny hoditra ary mampidi-doza ny mifandray niaraka tamin'ny lozam-pifamoivoizana. Ny asidra FLUOROACETIC dia mora mirehitra ary afaka mamokatra entona fluorida hidrôzenina, simika misy poizina, rehefa may. Ny poizin'ny methyl fluoroacetate dia ny hydrolyze hamorona asidra FLUOROACETIC, izay mitambatra amin'ny coenzyme A an'ny mitochondria sela hamorona fluoroacetyl CO ...
Fisehoana tsy misy loko ho an'ny vokatra cystalline beige Fahadiovana (GC) 99.0% min Rano 0,2% max Vy 3ppm max metaly hafa tokana 1ppm max 100kg / Fiber drum, 16Mt / FCL UN No.2823, Kilasy: 8, Vondron-kitapo: III ☑ Nampiasaina io manerana ny indostria, indostrian'ny fikarakarana manokana, indostrian'ny resina toy ny indostrian'ny additive, Flavor & fragment. ☑ Amin'ny indostrian'ny fivarotam-panafody, ampiasaina amin'ny synthesie (R) -3-Aminobutanol ho an'ny API anti-HIV Dolutegravir sy mpanelanelana amin'ny API hafa, toy ny Crot ...
☑ Mpitsabo mpanasitrana na mpandefa resin epoxy; ☑ Amin'ny indostrian'ny fanafody, mpanelanelana amin'ny API hafa, toa ny Imazalil, Tioconazole, Bifonazole. ☑ Zava-mahadomelina pesticide manan-danja ho an'ny synergist an'ny asidra borika, fanomanana famonoana bibikely sy famonoana bakteria. ☑ Imidazole dia akora tena ilaina ary mpanelanelana amin'ny indostria simika tsara, izay misy fampiharana marobe. Imidazole dia tsy misy ao amin'ny asidra amine purine misy asidra ribonucleic sy asidra deoxyribonucleic, fa ao koa ...
☑ Catalyst amin'ny polyurethane, ampiharina amin'ny polyurethane foam mavesatra sy elastomer mba hanitarana ny fiainana vilany, hamehezana ny fihetsika ary hampitombo ny hakitroky ny hazo fijaliana farany. ☑Ity dia azo ampiasaina ho toy ny mpitsabo resin epoxy resin, manatsara ny toetra mekanika ny vokatra toy ny miondrika, mamelatra ary mamintina, manatsara ny herinaratra fananana insulate sy fanoherana simika. Ampiasaina betsaka amin'ny solosaina sy fitaovana elektrika izy io; ampiasaina amin'ny takelaka vita pirinty vita pirinty sy ny boriborintany tafiditra ...
Bika Aman'endrika: Fotsy toa fotsy ary saika fotsy fotsy, Fahadiovan'ny hygroscopic (Titration): 99.0% min Rano: 1.0% max Toluene: 0,2% fahalotoana tsy fantatra tsy fantatra: 0,05% max Fahalotoana tanteraka: 0,2% lanja PH: 11-12.5 25kg / amponga, 9Mt / FCL fitaovana tsy mampidi-doza ☑ Nampiasaina tamin'ny fanafody. ☑ Cyclen sy ny derivatives dia mampiseho toetra fandrindrana mifantina ho an'ny vy miovaova, ny vy matevina, ny lanthanide ary ny ion actinide, ary na dia ho an'ny anionkaola na anorganika aza. Ny fitondran-tena marina amin'ny cyclen sy ...